Ukunakekelwa okuphelele - Foton Motor Group Co., Ltd.
uhlelo lwensizakalo yomhlaba
Sithembele kunethiwekhi yokusabalalisa yomhlaba wonke ukuhlinzeka abasebenzisi ngemikhiqizo esezingeni, insiza, izesekeli, ukuqeqeshwa kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe. UFoton wethule insizakalo ye- "Total Care" kancane kancane. Ngesikhungo sokusabalalisa sesifunda sokuzisekela esingu-13, isikhungo sokuqeqeshwa kwezinsizakalo eziyi-12, ngaphezu kwamanethiwekhi wenkonzo aphesheya kwezilwandle angama-1500, iFoton ibilokhu ithuthukisa njalo uhlelo lwayo lwenkonzo yomhlaba wonke ukuze yanelise amaklayenti adinga ukunakekelwa nokuwanikeza okuhlangenwe nakho okujulile kuwo. I-Foton igxile ekuhlangenwe nakho kwesikhangiso esidinga amakhasimende futhi yakhe konke okuphelele, okuphethe izinsizakalo ezenzelwe wena nezobuchwepheshe zamakhasimende.
Izingxenye Zokusabalalisa Izingxenye Emhlabeni Wonke
qinisekisa ukushayela okuphelele
Konke ukunakekelwa kokugcina impilo ukuqinisekisa ukushayela okuphelele. Izinsiza ezahlukahlukene ezenezela inani ziletha inani elengeziwe kumakhasimende, okukhombisa ukunakekelwa okuqotho kweFOTON. Ukubamba uchungechunge ngezikhathi ezithile zokuqonda izidingo zamakhasimende zokwenza intuthuko eqhubekayo nokuphishekela ubuhle.
Amadivayisi wokuhlola nokulungisa asezingeni eliphakeme, isiqinisekiso sezingxenyekazi zekhompuyutha; iqembu elihola phambili lezinsizakalo elenziwe ngohlelo olunamandla lokuqeqesha kanye nochwepheshe bezinsizakalo zomsebenzi.
Uhlelo oluhola phambili lwe-PMS, i-EPC, i-WMS, i-DMS kanye neCRM yolwazi lokuphathwa okuhlanganisiwe kokuhlinzekwa kwezingxenye ezinamazinga ama-3 kanye nokufakwa kwempahla (isikhungo sezingxenye zomhlaba, isikhungo sezingxenye zesifunda kanye nesiteshi sezinsizakalo (i-ejensi ekhethekile), esiqinisekisa iziteshi zezingxenye ezibushelelezi. kubuyekezwe ku-inthanethi ngamakhasimende.
Izingxenye eziyi-100% eziyiqiniso, izindleko eziphansi, ukugcina inani lemoto; intengo yezingxenye ezisobala, izindleko zehora lomsebenzi kanye nenqubo yokulungisa; imigudu ebushelelezi yezikhalazo zamakhasimende.
INethiwekhi YOKUSEBENZA KWAMAZWE naphesheya kwezilwandle
Vala izifunda eziyinhloko
I-FOTON isungule inethiwekhi yesevisi yaphesheya kwezilwandle enezinsizakalo eziyi-1,485 emazweni angaphezu kwezi-80 nezifunda, kufaka phakathi izikhungo zokuphathwa kwezinsizakalo ezisezingeni elingu-168 kanye nabathengisi bezinsizakalo eziyi-1,317 ezingeni-2, kanye nabathengisi bezitolo eziyi-149 level-1 kanye nabangu-1,205 level-2 abathengisi bezitolo, ezihlanganisa izifunda eziyinhloko e-Asia, eMelika, e-Afrika naseYurophu.
Inqubomgomo yesevisi ehola phambili embonini
Ukugxila ekwanelisekeni kwamakhasimende, i-FOTON isebenze inqubomgomo yesevisi ehola phambili embonini ukuhlinzeka isikhathi eside sewaranti kumakhasimende. Inqubomgomo yesevisi iyahlukahluka kusuka kumikhiqizo, imigqa yomkhiqizo namamodeli. Ngemininingwane yenqubomgomo yesiqinisekiso kanye nenqubomgomo yewaranti eyimpoqo, sicela ubheke ibhukwana lewaranti yomshayeli.
UKUQEQESHWA KWEZINKONZO ZAMALUNGA
ukuqeqeshwa konke okuzungezile
IFOTON ibeke izikhungo eziyi-12 zokuqeqesha abantu eThailand, eRussia, eVietnam, eSaudi Arabia, eKenya, eCuba, ePeru, eChile, e-Iran, ePhilippines, e-Columbia nase-Algeria. IFOTON manje isihlinzeka ngezifundo zokuqeqesha emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda. I-FOTON inikeza abahlinzeki bezinsizakalo ukuqeqeshwa konke okuzungezile ngezikhungo zokuqeqesha izinsizakalo emhlabeni jikelele. Izikhungo zokuqeqesha ziphinde zinikeze iziteshi ezintsha zezinsizakalo uqeqesho ekuphathweni kwezinsizakalo nakwezobuchwepheshe bezinsizakalo ukuze zisize iziteshi zezinsizakalo ukujwayela i-FOTON nokunikeza izinsizakalo ezingcono kumakhasimende.
Leli thimba selakhiwe ngabafundisi abangama-30, bahlanganisa izilimi ezingaphezu kwezingu-20, okubalwa kuzo isiNgisi, isiFulentshi, iSpanishi, isi-Arabhu nesiRashiya. Izikhungo zokuqeqesha zinikeza ukuqeqeshwa ekuphathweni kwensizakalo, ukuphathwa kwezingxenye ezithile kanye nobunjiniyela bezinsizakalo, kuhlose ukuhlinzeka wonke amakhasimende ngemfundo yokufunda impilo yonke.